Sida loogu gudbiyo qoraalka gacanta tooska kombiyuutarka leh Lens Google | War gadget
Sida loogu gudbiyo qoraalka gacanta si toos ah kombiyuutarkaaga Google Lens
Rafa Rodriguez Ballesteros | | Tababarada
Waxaan horey u ogaanay cabirka Google, dhinac walba. Rug-weyn teknolojiyad caalami ah oo ku dhalatay mahadnaqa mashiinka raadinta. Taasna "in kasta oo" ay ka mid tahay shirkadaha ugu awoodda badan adduunka, waxay sii wadaa inay ka shaqeyso wixii ka dhigay waxa weyn. Google waxay cusbooneysiisay App-ka mobilada ee mashiinkeeda raadinta ku darista isticmaalka Google Lens oo leh astaamo cusub runtii xiiso leh.
Hadda Google Lens wuxuu awoodaa inuu aqoonsado qoraalkaaga gacanta oo noo soo bandhigta suurtagalnimada in si toos ah loogu gudbiyo kombiyuutarka. Mar dambe uma baahnid inaad ku gudbiso qoraallada xaashi nadiif ah ... taasi miyaanay u muuqan sidii baas? Google Lens ayaa leh algorithm horumarsan oo awood u leh qeexida qoraalka gacanta lagu qoray, laakiin uguyaraan waa inaad lahaataa qoraal gacmeed lagu akhrin karo. Haddii aad haysatid qoraal gacmeed hufan oo aad rabto inaad ogaato sida loogu gudbiyo qoraalka gacmeedka kombuyuutarkaaga, waxaan kuugu sharxi doonnaa hoosta.
1 Google Lens, qoraalkaaga gacanta oo laga soo qaado warqad ilaa kombiyuutar
1.1 U gudbi qoraalka gacanta lagu qoray kombiyuutarka talaabo talaabo ah adoo adeegsanaya Lens Google
Google Lens, qoraalkaaga gacanta oo laga soo qaado warqad ilaa kombiyuutar
Haddii qalabkani jiri lahaa dugsigeyga sare ama jaamacad, waxaan badbaadin lahaa saacado nadiifinta qoraalada iyo waraaqaha. Dhab ahaantii, Google Lens wuxuu u noqdaa saaxiib aad muhiim ugu ah ardayda. Caawinaad dheeraad ah oo bilaash ah ayaa naga dhigi doonta inaan helno waqti badan oo aan heli karno. Awood ku wareejinta qoraaladaada, qoraaladaada ama mashruuca dhamaadka-koorsada kumbuyuutarka weligiis sidan uma fududaan oo soon. Hadaad rabto inaad ogaato sida loo adeegsado qalabkan cusub, markaa waxaan kuu sheegeynaa talaabo talaabo.
Waxa ugu horreeya ee ay tahay inaad sameyso waa cusbooneysii arjiga raadinta Google maadaama tani ay tahay muuqaal aad u dhow. Google Lens ayaa ka muuqda barnaamijka mashiinka raadinta oo ah hal ikhtiyaar oo dheeraad ah oo lagu sameeyo baaritaannada. Sidoo kale Waa lagama maarmaan in kumbuyuutarka aan isticmaali doonno aan ku rakibeyno Google Chrome. Labadaba markaan leenahay, waxaan ku qaban karnaa howsha si fudud dhib la'aan.
U gudbi qoraalka gacanta lagu qoray kombiyuutarka talaabo talaabo ah adoo adeegsanaya Lens Google
Waxa ugu horeeya ayaa ah waa inaan soo galnaa kumbuyuutarkeena, iyada oo loo marayo Google Chrome, isla koontada isticmaale ee aan ku haysanno arjiga taleefanka. Sidaas waxaan u wareejin karnaa qoraalka aan ku soo qabaneyno kaamirada casriga ah isla markaana ku wareejin karno sabuuradda kombiyuutarkeena. Oo sidaas ayaan ku dhejin karnaa qoraalka meesha aan uga baahanahay.
Markuu furanyahay Google Lens, waxaan diirada saareynaa qoraalka aan dooneyno inaan nuqul ka dhigano waana inaan taabo astaamaha «qoraalka» arjiga si loo tuuro sawirada, haddii ay jiraan wax ku jira isla dukumintiga.
Al hubi xulashada qoraalka, algorithm wuxuu tuurayaa sawirada suuragalka ah ee kujira dukumintiga. Adoo gujinaya «qoraalka», Appku wuxuu ina tusayaa qoraalka laga helay kaamerada. Waqtigan xaadirka ah, shaashadda shaashadda, waxaan dooran karnaa gacanta dhammaan qoraalka soo muuqda, ama qayb uun na xiiseysa. Markii aan sameynay xulashada qoraalka oo aan dooneyno inaan gebi ahaanba nuqulo, waa inaan sameynaa dhagsii «xulo dhammaan». Waxan samaynaya waxaan horeyba u haysanay qoraalka oo lagu soo guuriyay sabuuradda Google Lens. Hadda waxay lagama maarmaan noqon lahayd in «loo diro» xulashada qoraalkaas kombuyuutarkayaga ...
Markii aan doorano qoraalkayaga oo guji si aad u nuquliso, dalabku wuxuu ina tusayaa xulashooyin cusub. Si loogu wareejiyo xulashada qoraalka lagu sameeyay kumbuyuutarkeena, waa inaan gujinnaa "Nuqul kumbuyuutar ah". Sidan ayaan ku awoodnaa kooxda miiska noogu hayso qoraalka gacanta lagu qoray iyo in aan soo xulnay.
Adiga oo gujinaya «nuqul kumbuyuutar ah» waan awoodnaa liiska qalabka la heli karo. Tani waa tan loo baahan yahay in markii hore, sidaan soo sheegnay, waxaan leenahay gasho Google Chrome isla koontada aan ugu isticmaalno Google Lens taleefanka casriga ah. Hadaan sidan ku qabanay kombiyuutarkayagu wuxuu ka muuqan doonaa midka aan dooran karno.
Marka tan la sameeyo, farriin ayaa ka soo muuqan doonta shaashadda taas oo muujinaysa taas xulkeenii qoraalka ayaa horeyba loogu soo guuriyey kombuyuutarkayaga. Si aan u helno qoraalka aan horey uga helnay kamaradda casriga, waxaan kaliya oo aan fulin doonnaa amarka «koollada».
Waxaan "ku dhejin karnaa" biraawsarka, ama si toos ah barnaamijkeenna tafatirka qoraalka. Waxaanna horeyba kuugu haynaa qoraal gacanta lagu qoro oo si toos ah ugu jira desktop-keena. Ka fudud oo dhakhso aan macquul ahayn!
Hubso taas ma qiyaasi kartid in wareejinta qoraalka gacanta ee kombuyuutarkeena ay noqon doonto wax fudud. Sidii aan ku soo sheegnay bilowgii Google Lens waxay caawin weyn u noqon doontaa ardayda. Awood waqti badbaadi qorida kumbuyuutarka had iyo jeer waa caawimaad weyn. Sidaan aragnay waxaad u baahan tahay oo keliya inaad haysato qalabka aasaasiga ah ee Google.
Hawl aad qaban karto leh taleefan kasta oo casri ah iyada oo aan loo baahnayn qeexitaanno aad u horumarsan. Y kumbuyuutar kasta kaas oo aad ku rakibtay biraawsarka Google Chrome. Hal tusaale oo dheeraad ah oo ku saabsan sida Google noloshu noogu fududaanayso. Iyo kiiskan oo leh qalab bilaash ah, oo aan lahayn xayeysiis iyo tayo wanaagsan. Miyaadan wali isku dayin iyaga? Horey waad u taqaanay sida loo sameeyo.
U fiirso sida loogu dhajiyo sawirro aan muuqaal lahayn dusha Instagram
Wadada buuxda ee maqaalka: War gadget » General » Tababarada » Sida loogu gudbiyo qoraalka gacanta si toos ah kombiyuutarkaaga Google Lens
Salaan Waxaan jeclaan lahaa inaad ka faallooto dhinaca amniga. Google ma daaweynayaa qoraalkeena? Waxaan ka baqayaa inay lamid tahay aqoonsiga codka (tusaale ahaan, Samsung's Svoice, halkaasoo ay tahay inaad u fasaxdo inay kaydsadaan codkaaga, haddii kale ma isticmaali kartid).
Waxaan horey u ognahay in Google OCRs sawirada aad ku lifaaqdo emaylkaaga Gmail. Maxaa u diidaya inay helaan qoraalka gacantaada?
10-ka kulan ee ugu fiican kubada cagta bilaa Internetka, ee iOS iyo Android